Didier Drogba oo tilmaamay difaacii ugu adkaa ee uu wajaho. Ma ahan Vidic iyo Ferdinand! – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Didier Drogba oo tilmaamay difaacii ugu adkaa ee uu wajaho. Ma ahan Vidic iyo Ferdinand!
By admin on November 25, 2018 No Comment
Axad, November, 25, 2018(HNN) Weeraryahankii hore ee kooxda Chelsea, Didier Drogba ayaa la weydiiyay difaacii ugu adkaa ee uu wajahay intii uu ku jiray xirfaddiisa kubadda cagta oo uu dhowaan soo af-jaray.
Blues halyeeygoodii ayaa tilmaamay Gerard Pique inuu yahay difaacii ugu wanaagsanaa ee uu wajaho.
Waxaa sidoo kale Drogba uu ammaan ugu qubeeyay mattaanayaashii Manchester United ee Rio Ferdinand iyo Nemanja Vidic.
Ivorian-kan ayaa lagu xasuustaa inuu ka mid yahay weeraryahannadii ugu halista badnaa ee soo mara kubadda cagta qaaradda Europe qarnigaan, waxaana uu ahaa mid aad u argagixiya difaacyada kasoo horjeeda intii uu ka ciyaarayay horyaallada dalalka France, England, China, Turkey iyo ugu dambeyn USA.
Drogba ayaa wajahay difaacyo awood sare leh intii uu ku jiray xirfaddiisa kubadda cagta, gaar ahaan waayihiisii quruxda badnaa ee Chelsea, waxaana uu ka jawaabay difaacyadi ugu wanaagsanaa ee uu ka hortagay.
“Way adagtahay inaan dhaho midka aan wajahay, maxaa yeellay, inta ugu badan, waxaan ka hortagayay laba difaac oo mattaaneysan, sidaas darteed lammaanayaasha difaaca ugu wanaagsan ee aan wajaho waxaa ka mid ah Vidic iyo Ferdinand” ayuu u sheegay Sky Sports.
“Difaacyo wadareedkii kale aan wajahay ee ugu wanaagsanaa waxa uu ahaa Puyol iy Pique” ayuu yiri Drogba.
Waxaa la weydiiyay haddii uu mid si gaar ah farta ugu fiiqi karo inuu yahay midkii ugu wanaagsanaa marka uu wajahay, waxaana uu tilmaamay Gerard Pique.
“Waxa ay ila tahay Pique, maxaa yeellay, loollan adag ayaa ina dhex maray, xaqiiqdii aad u aad u adag” ayuu ku jawaabay 40-jirka dhowaan isaga fariistay kubadda cagta.
Drogba ayaa intaas raaciyay in dhammaantood ay ahaayeen kuwo aad u xirfad sarreeya, heer sare ah isla markaasna tayo badan leh.
Sidoo kale Captain-kii hore ee qaranka Ivory Coast ayaa suuro gal ka dhigay suuro-galnimada uu macallin kubadda cagta ah ku noqonayo.
Didier Drogba oo tilmaamay difaacii ugu adkaa ee uu wajaho. Ma ahan Vidic iyo Ferdinand! added by admin on November 25, 2018